July 2020 - Myanmar Red News
TikTok အပါ တရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာ apps များကိုပိတ်ရန် စောင့်ကြည့်နေကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောကြား
by R Kar July 7, 2020 July 7, 2020 NewsLeaveaComment on TikTok အပါ တရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာ apps များကိုပိတ်ရန် စောင့်ကြည့်နေကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောကြား
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo မှ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် TikTok အပါအဝင် တရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာ apps များကို ပိတ်ပင်ရန် စောင့်ကြည့်လျက် ရှိကြောင်း ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ Fox News သတင်းဌာန၏ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် Mike Pompeo မှ “မိမိ အနေဖြင့် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ ရှေ့သို့ မထွက်ချင်သော်လည်း ၎င်းသည် မိမိတို့ စောင့်ကြည့်နေသည့် အရေးကြီးသည့်အရာဖြစ်ကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်ဥပဒေပြုအမတ်များမှ TikTok ၏ အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း၊ တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများလိုအပ်နေသည့် တရုတ်ဥပဒေများနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။Coronavirus ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအပေါ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှု၊ ဟောင်ကောင်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ၂ နှစ်ကြာ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကြား တင်းမာမှုများမြင့်တက်နေချိန်တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo ၏ ပြောကြားချက်များ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံကြား နယ်စပ်ရေးရာ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်အခြေစိုက် ByteDance ကုမ္ပဏီပိုင် ဗီဒီယို app တစ်ခုဖြစ်သည့် TikTok ကို အခြားသော တရုတ် app ၅၈ ခုနှင့်အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပိတ်ပင်ခဲ့ပါသည်။တရုတ်နိုင်ငံမှ ဟောင်ကောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွက် အမျိုးသား လုံခြုံရေးဥပဒေသစ် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးနောက် TikTok သည် ဟောင်ကောင်ဈေးကွက်မှ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ထွက်ခွာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Reuters သတင်းဌာနမှ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့ ညပိုင်းက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
TikTok အပါ တရုတျဆိုရှယျမီဒီယာ apps မြားကိုပိတျရနျ စောငျ့ကွညျ့နကွေောငျး အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးပွောကွား
အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Mike Pompeo မှ အမရေိကနျနိုငျငံသညျ TikTok အပါအဝငျ တရုတျဆိုရှယျမီဒီယာ apps မြားကို ပိတျပငျရနျ စောငျ့ကွညျ့လကျြ ရှိကွောငျး ဇူလိုငျလ ၆ ရကျနေ့ ညပိုငျးက ပွောကွားခဲ့သညျ။ Fox News သတငျးဌာန၏ အငျတာဗြူးတဈခုတှငျ Mike Pompeo မှ “မိမိ အနဖွေငျ့ သမ်မတဒျေါနယျထရနျ့၏ ရှသေို့ မထှကျခငျြသျောလညျး ၎င်းငျးသညျ မိမိတို့ စောငျ့ကွညျ့နသေညျ့ အရေးကွီးသညျ့အရာဖွဈကွောငျး” ပွောကွားခဲ့သညျ။
အမရေိကနျဥပဒပွေုအမတျမြားမှ TikTok ၏ အသုံးပွုသူအခကျြအလကျမြားကို ကိုငျတှယျမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ အမြိုးသားလုံခွုံရေးအပျေါ စိုးရိမျပူပနျကွောငျး၊ တရုတျ ကှနျမွူနဈပါတီမှ ထိနျးခြုပျထားသညျ့ ထောကျလှမျးရေးလုပျငနျးမြားနှငျ့ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရနျ ပွညျတှငျးကုမ်ပဏီမြားလိုအပျနသေညျ့ တရုတျဥပဒမြေားနှငျ့ပတျသကျ၍ စိုးရိမျပူပနျလကျြရှိကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါသညျ။Coronavirus ရောဂါ ကူးစကျပြံ့နှံ့မှုအပျေါ ကိုငျတှယျဖွရှေငျးမှု၊ ဟောငျကောငျတှငျ တရုတျနိုငျငံ၏ လုပျဆောငျမှုမြား၊ ၂ နှဈကွာ ကုနျသှယျရေးစဈပှဲမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ အမရေိကနျ-တရုတျ နှဈနိုငျငံကွား တငျးမာမှုမြားမွငျ့တကျနခြေိနျတှငျ အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Mike Pompeo ၏ ပွောကွားခကျြမြား ပျေါထှကျလာခဲ့သညျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံနှငျ့ တရုတျနိုငျငံကွား နယျစပျရေးရာ ပဋိပက်ခဖွဈပှားခဲ့ပွီးနောကျ တရုတျအခွစေိုကျ ByteDance ကုမ်ပဏီပိုငျ ဗီဒီယို app တဈခုဖွဈသညျ့ TikTok ကို အခွားသော တရုတျ app ၅၈ ခုနှငျ့အတူ အိန်ဒိယနိုငျငံမှ ပိတျပငျခဲ့ပါသညျ။တရုတျနိုငျငံမှ ဟောငျကောငျကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေအတှကျ အမြိုးသား လုံခွုံရေးဥပဒသေဈ ပွဋ်ဌာနျးခဲ့ပွီးနောကျ TikTok သညျ ဟောငျကောငျဈေးကှကျမှ ရကျအနညျးငယျအတှငျး ထှကျခှာသှားမညျဖွဈကွောငျး Reuters သတငျးဌာနမှ ဇူလိုငျလ ၆ ရကျနေ့ ညပိုငျးက ထုတျပွနျကွညောခဲ့သညျ။
by R Kar July 7, 2020 July 7, 2020 NewsLeaveaComment on ယနေ့ ဇူလိုင်လ(၇)ရက်နေ့တွင် စောဒေးဗစ်(ခ)ဒေးဗစ်လားကို ထပ်မံရုံးချိန်းခေါ်ယူ
စောဒေးဗစ်(ခ)ဒေးဗစ်လားနှင့် ဦးဝေထွန်းတို့ကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ(၂၅) ဖြင့် ယနေ့ ဇူလိုင်လ(၇)ရက်နေ့တွင် ထပ်မံရုံးချိန်းခေါ်ယူ၍ အမှုကို ဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး
လာမည့်ဇူလိုင်လ (၉)ရက်နေ့တွင် စွဲချက်တင်ပြီးနောက် အပြီးသတ် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ အမှုကို ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ယနေ့ ဇူလိုငျလ(၇)ရကျနတှေ့ငျ စောဒေးဗဈ(ခ)ဒေးဗဈလားကို ထပျမံရုံးခြိနျးချေါယူ
စောဒေးဗဈ(ခ)ဒေးဗဈလားနှငျ့ ဦးဝထှေနျးတို့ကို သဘာဝဘေးအန်တရာယျဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒပေုဒျမ(၂၅) ဖွငျ့ ယနေ့ ဇူလိုငျလ(၇)ရကျနတှေ့ငျ ထပျမံရုံးခြိနျးချေါယူ၍ အမှုကို ဆကျလကျစဈဆေးခဲ့ပွီး
လာမညျ့ဇူလိုငျလ (၉)ရကျနတှေ့ငျ စှဲခကျြတငျပွီးနောကျ အပွီးသတျ အကွိုညှိနှိုငျးအစညျးအဝေးပွုလုပျ၍ အမှုကို ဆကျလကျစဈဆေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။
by R Kar July 7, 2020 July 7, 2020 Cele NewsLeaveaComment on ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့ ကျော်ထက်အောင်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေး ပရိသတ်တွေကြား စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာ
by R Kar July 7, 2020 July 7, 2020 NewsLeaveaComment on ထိုင်းလူငယ် ၁၃ ယောက်ကို ကယ်ရင်း အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ ရေငုပ်သမားအတွက် (၂)နှစ် ပြည့် ရည်စူးကုသိုလ် ပြုလုပ်
” ထမ့်လွမ်ဂူ ” ထဲတွင်ပိတ်မိနေသော ထိုင်းလူငယ် ၁၃ ယောက်ကို ကယ်ဆယ်ရင်း အသက်ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ ရေငုပ်သမားအတွက် ( ၂ )နှစ် ပြည့် ရည်စူးကုသိုလ် ပြုလုပ်.. ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သော ” ထမ့်လွမ်ဂူ ” ထဲတွင် ပိတ်မိနေခဲ့သောလူငယ်တောဝက်အကယ်ဒီဘောလုံးအသင်း (၁၃) ယောက်ကို နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်ရေငုပ်သများနှင့်အတူ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ်….
ထိုင်းရေငုပ်သမား ” ဒုတိယရေတပ်ဗိုလ်ဟောင်း စမန် ကူနန်း ” ကျာဆဲမ်” ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့ညမှာသေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက် ( ၂ ) နှစ်ပြည့်အောက်မေ့လွမ်းဆွတ်သတိရတဲ့အနေနဲ့ သူ၏ဇနီးနှင့်အတူ တောဝက်ကလေးများ ၊ဘုရားအမှူးရှိတဲ့သံဃာတော် ၁၀၈ ပါးတို့ကိုပင့်ဖိတ်ကာ ဆွမ်းခဲဖွယ် လှူဘွယ်ဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့် ထမ့်လွမ်ဂူရှေ့ ” ထမ့်လွမ်သူရဲကောင်း ကျာဆဲမ် ” ရုပ်ထုရှေ့တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ကြပါတယ် ။
” ထမ့်လွမ်သူရဲကောင်း ( သို့မဟုတ် ) ဒုတိယရေတပ်ဒုဗိုလ်ဟောင်း ” ကျာဆဲမ်ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့ည ၂၀:၃၇ မိနစ်မှာ ကလေးတွေကို ဂူအပြင်ပသို့ အန္တရာယ်ကင်းကင်းဖြင့်ပြန်လည်ထွက်ရှိလာနိုင်ဘို့အတွက် Plan အရ ကလေးများရောက်ရှိ နေတဲ့နေရာ ( ၁၇၀၀ မီတာအရှည် ) အထိ ဂူနံရံတွေမှာ အောက်စီဂျင်ဗူးတွေကိုအရေးပေါ်ချိတ်ထားနိုင်ရေး…..
ဂူထဲကိုရေငုပ်ဝင်သွားရင်းမှ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့ ၂၂:၀၀ အချိန်ဂူထဲမှပြန်အထွက်တွင် Fork ( Sam Yak ) မရောက်ခင် ရေငုပ်နေရင်ူရုတ်တရက်ပါမလာတော့သဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှု့ရာ ရေထဲတွင်သတိလစ်နေသဖြင့်၎င်းအား Chamber3ထိခက်ခက်ခဲသယ်ထုပ်လာပြီး သူနာပြုဆေးတပ်မှကယ်တင်ဘို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် လည်း ည ၀၁:၀၀ ချိန်ခန့်တွင်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ဂူပေါက်ဝမှနေ၍ကလေးတွေခိုအောင်းနေတဲ့နေရာအထိ အသွားအပြန် ၁၂ နာရီအချိန်ပေးရပြီး အသွား ၆ နာရီ ၊ အပြန် ၅ နာရီကြာမြင့်ပါတယ် ၊ ဂူထဲမှာ အောက်စီဂျင် ၂၀% ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိသည့်အတွက်…
အောက်စီဗူးပေါင်း ၇၀၀ နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းကေဘယ်လ်ကြိုးများ ၅ ကီလိုမီတာအရှည်ကို ရေငုပ်သမားအင်အား (၁၀၀ ) ဖြင့် အဝင်အထွက်လမ်းတစ်လျှောက်နဲ့ ကလေးတွေရှိတဲ့နေရာအထိအဖွဲ့လိုက်ဝင်ရောက်ပို့ဆောင်ချိတ်ဆက်ရတဲ့အတွက် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ရေငုပ်ပြီးသွားရသလို….တစ်ချို့နေရာမှာလမ်းလျှောက်သွားရပါတယ် ၊ ခက်ခဲကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းတွေလည်းရှိတာမို့အပြန်လမ်းမှာပင်ပန်းနွယ်နယ်မှုကြောင့်နှင့်အောက်စီဂျင်မလုံလောက်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ၊ သေဆုံးချိန်တွင်အသက် (၃၈) နှစ်သာရှိပါသေးသည် ။
၂၀၁၈ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ ၊ နေ့လည် ၁၄:၀၀ ချိန့်မှစတင်၍ ဂူထဲတွင်ပိတ်မိနေပြီး ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ည ( ၉ ရက်နှင့် ၅ နာရီ ၄၁ မိနစ် အကြာ ) မှာ ကလေးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့မှာစတင်ပြီး… ဂူပြင်ပသို့ကယ်ထုတ်မှုလုပ်ငန်းတွေစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့ညမှာတော့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ပြီးမြောက်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ထိုငျးလူငယျ ၁၃ ယောကျကို ကယျရငျး အသကျပေးလိုကျရတဲ့ ရငေုပျသမားအတှကျ (၂)နှဈ ပွညျ့ ရညျစူးကုသိုလျ ပွုလုပျ
” ထမျ့လှမျဂူ ” ထဲတှငျပိတျမိနသေော ထိုငျးလူငယျ ၁၃ ယောကျကို ကယျဆယျရငျး အသကျပေးဆပျလိုကျရတဲ့ ရငေုပျသမားအတှကျ ( ၂ )နှဈ ပွညျ့ ရညျစူးကုသိုလျ ပွုလုပျ.. ထိုငျးနိုငျငံမွောကျပိုငျးတှငျ ကမ်ဘာကြျောခဲ့သော ” ထမျ့လှမျဂူ ” ထဲတှငျ ပိတျမိနခေဲ့သောလူငယျတောဝကျအကယျဒီဘောလုံးအသငျး (၁၃) ယောကျကို နိုငျငံတကာကယျဆယျရေးကြှမျးကငျြရငေုပျသမြားနှငျ့အတူ ကယျဆယျရေးလုပျငနျးမြားဆောငျရှကျခဲ့စဉျ….
ထိုငျးရငေုပျသမား ” ဒုတိယရတေပျဗိုလျဟောငျး စမနျ ကူနနျး ” ကြာဆဲမျ” ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ ၆ ရကျနညေ့မှာသဆေုံးခဲ့တဲ့အတှကျ ( ၂ ) နှဈပွညျ့အောကျမလှေ့မျးဆှတျသတိရတဲ့အနနေဲ့ သူ၏ဇနီးနှငျ့အတူ တောဝကျကလေးမြား ၊ဘုရားအမှူးရှိတဲ့သံဃာတျော ၁၀၈ ပါးတို့ကိုပငျ့ဖိတျကာ ဆှမျးခဲဖှယျ လှူဘှယျဝတ်ထုအစုစုတို့ဖွငျ့ ထမျ့လှမျဂူရှေ့ ” ထမျ့လှမျသူရဲကောငျး ကြာဆဲမျ ” ရုပျထုရှတှေ့ငျ ၂၀၂၀ ခုနှဈဇူလိုငျလ ၆ ရကျနကေ့ကငျြးပခဲ့ကွပါတယျ ။
” ထမျ့လှမျသူရဲကောငျး ( သို့မဟုတျ ) ဒုတိယရတေပျဒုဗိုလျဟောငျး ” ကြာဆဲမျဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဇူလိုငျလ ၅ ရကျနညေ့ ၂၀:၃၇ မိနဈမှာ ကလေးတှကေို ဂူအပွငျပသို့ အန်တရာယျကငျးကငျးဖွငျ့ပွနျလညျထှကျရှိလာနိုငျဘို့အတှကျ Plan အရ ကလေးမြားရောကျရှိ နတေဲ့နရော ( ၁၇၀၀ မီတာအရှညျ ) အထိ ဂူနံရံတှမှော အောကျစီဂငျြဗူးတှကေိုအရေးပျေါခြိတျထားနိုငျရေး…..
ဂူထဲကိုရငေုပျဝငျသှားရငျးမှ ဇူလိုငျလ ၆ ရကျနေ့ ၂၂:၀၀ အခြိနျဂူထဲမှပွနျအထှကျတှငျ Fork ( Sam Yak ) မရောကျခငျ ရငေုပျနရေငျူရုတျတရကျပါမလာတော့သဖွငျ့သှားရောကျကွညျ့ရှု့ရာ ရထေဲတှငျသတိလဈနသေဖွငျ့၎င်းငျးအား Chamber3ထိခကျခကျခဲသယျထုပျလာပွီး သူနာပွုဆေးတပျမှကယျတငျဘို့ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ လညျး ည ၀၁:၀၀ ခြိနျခနျ့တှငျသဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ ။ဂူပေါကျဝမှနေ၍ကလေးတှခေိုအောငျးနတေဲ့နရောအထိ အသှားအပွနျ ၁၂ နာရီအခြိနျပေးရပွီး အသှား ၆ နာရီ ၊ အပွနျ ၅ နာရီကွာမွငျ့ပါတယျ ၊ ဂူထဲမှာ အောကျစီဂငျြ ၂၀% ရာခိုငျနှုနျးခနျ့သာရှိသညျ့အတှကျ…
အောကျစီဗူးပေါငျး ၇၀၀ နှငျ့ ဆကျသှယျရေးဖုနျးကဘေယျလျကွိုးမြား ၅ ကီလိုမီတာအရှညျကို ရငေုပျသမားအငျအား (၁၀၀ ) ဖွငျ့ အဝငျအထှကျလမျးတဈလြှောကျနဲ့ ကလေးတှရှေိတဲ့နရောအထိအဖှဲ့လိုကျဝငျရောကျပို့ဆောငျခြိတျဆကျရတဲ့အတှကျ တဈခြို့နရောတှမှော ရငေုပျပွီးသှားရသလို….တဈခြို့နရောမှာလမျးလြှောကျသှားရပါတယျ ၊ ခကျခဲကဉျြးမွောငျးတဲ့လမျးတှလေညျးရှိတာမို့အပွနျလမျးမှာပငျပနျးနှယျနယျမှုကွောငျ့နှငျ့အောကျစီဂငျြမလုံလောကျမှုကွောငျ့သဆေုံးသှားခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ ၊ သဆေုံးခြိနျတှငျအသကျ (၃၈) နှဈသာရှိပါသေးသညျ ။
၂၀၁၈ ဇူလိုငျလ ၂၃ ရကျနေ့ ၊ နလေ့ညျ ၁၄:၀၀ ခြိနျ့မှစတငျ၍ ဂူထဲတှငျပိတျမိနပွေီး ဇူလိုငျလ ၂ ရကျနညေ့ ( ၉ ရကျနှငျ့ ၅ နာရီ ၄၁ မိနဈ အကွာ ) မှာ ကလေးမြားကိုရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပွီး ဇူလိုငျလ ၈ ရကျနမှေ့ာစတငျပွီး… ဂူပွငျပသို့ကယျထုတျမှုလုပျငနျးတှစေတငျလုပျဆောငျနိုငျခဲ့ကွပါတယျ ၊ ဇူလိုငျလ ၁၀ ရကျနညေ့မှာတော့ ကမ်ဘာကြျောတဲ့ ကယျဆယျရေးလုပျငနျးကွီးအောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ ပွီးမွောကျခဲ့ကွပါတယျ ။
by R Kar July 7, 2020 July 7, 2020 NewsLeaveaComment on သတင်းထွက်နေတဲ့ လူနာနံပါတ်(၃၁၁) ရန်ကုန်ကနေ တိုက်ကြီးကို YBS ယာဉ်လိုင်းနဲ့ ပြန်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်
by R Kar July 7, 2020 July 7, 2020 Cele NewsLeaveaComment on အခက်အခဲတွေကြားထဲက လက်ဝတ်လက်စားတွေရောင်း အကြွေးတွေတင်ခဲ့ပြီး အိမ်ဆောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ လိမ္မော်သီး
by R Kar July 7, 2020 July 7, 2020 Cele NewsLeaveaComment on တစ်လကိုသိန်း(၁၀၀၀)ဖိုးလောက် မေသန်းနုနဲ့ စိန်ရောင်း/ဝယ်တွေလုပ်တုန်းက ရောင်းခဲ့ရကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ စုရှိုင်း
တဈလကိုသိနျး(၁၀၀၀)ဖိုးလောကျ မသေနျးနုနဲ့ စိနျရောငျး/ဝယျတှလေုပျတုနျးက ရောငျးခဲ့ရကွောငျး ပွောပွခဲ့တဲ့ စုရှိုငျး
by R Kar July 7, 2020 July 7, 2020 NewsLeaveaComment on ကျောက်တံတားမြို့တွင် ဓားထောက် ၍ ကားလုမောင်းပြေးသူအား မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိ
by R Kar July 7, 2020 July 7, 2020 Cele NewsLeaveaComment on အလှုငွေ (၁၀) သိန်းကို မိခင်ရဲ့ မွေးနေ့အကြိုအလှူအဖြစ် ဖားကန့်မြို့မြေပြိုမှုအတွက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ လူမင်း
by R Kar July 7, 2020 July 7, 2020 Cele NewsLeaveaComment on အက်ရှင်မင်းသမီးလေးလို့ လူသိများတဲ့ယဉ်လတ် စစ်ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့မည်